Vitunes. Ahoana ny fananana mpilalao mozika faran'izay tsara sy minimalista | Avy amin'ny Linux
DMoZ | | fampiharana, GNU / Linux, Tutorials / Manuals / Tips
Ivelan'ny fiankinan-doha saika manic amin'ny console, dia ny tsiriko amin'ny minimalism ...
Andro vitsy lasa izay, mpiara-miasa amin'ny ArchLinux nametraka ny fanontaniana izay niteraka ny fifandraisana Geek-Minimalism, izay nahatonga ahy hijery jery todika sy hanome valiny sahaza ny fahatsapako sy ny filôzôfia, ny vokany dia nahatonga ny fiheverana ny minimalism tamin'ny fiainako, satria efa ela aho no nahatakatra izany amin'ny lehibe indrindra ampahany amin'ny fotoana, kely kokoa ny ... Ary, raha ny fahitako azy, dia mazàna izahay mamoaka ivelany izay ao anatintsika amin'ny endrika fahatsapana.
Nandritra ny taona maro lasa izay nanomboka ny fanombatombanana tamin'ny fanahiko sy ny neurônina dia nahavita nahomby teo anelanelan'ireo sy ireo faritra hafa amin'ny fiainako aho. Rehefa nandalo ireo dingana ireo aho dia nahatsikaritra ny fandefasana ny tsiroko ho an'ny maso sy ny masoko, ho an'ireo tena ilaina sy miasa (tsy tsy ampy fomba
Miresaka amin'ny solosaina, tonga tamin'ny fehin-kevitra aho fa raha mila rindrambaiko mamela ahy hankafy milalao sarimihetsika aho, dia tsy mila ahitana safidy ahafahana mijery antontan-taratasy sy hitety ireo pejin-tranonkala; Toy izany koa, raha toa ny mpilalao tadiaviko ny zavatra tadiaviko, ny hany ilaiko dia ny hanokana ny asany.
Izany no nataoko rehefa avy nanandrana fampiharana isan-karazany izay nahatonga ny fahatsapako ho henoko tamin'ny climaxes, vokatra avy amin'ny feon-kira manjavozavo indraindray ary naoty mozika mampihetsi-po indraindray, dia ilay iray voafaritra, ny anarany ... Vitunes ...
Inona no mampiavaka an'ity mpilalao ity?
Voalohany indrindra, mpilalao mozika fotsiny izy io, ary raha tsy ampy izany dia miasa amin'ny alàlan'ny console fotsiny izy, tsy manana safidy tsy misy dikany sy tsy ilaina koa izy, izay ataony, mahomby tsara, haingana ary mandany loharano vitsivitsy avy amin'ny fitaovan'ny solosaintsika. .
Tsy mamela antsika hilalao mozika voatahiry ao anaty kapila kapila (anatiny na ivelany) isika fa mamela antsika hilalao mozika amin'ny Internet koa. Ireo izay nahita isa, izay afaka manolotra anay ny mety hitantanana ny lisitry ny lisitry ny iTunes (Misy dikany raha mijery ny anarany isika, na dia tsy mbola fantatro aza).
Ny fametrahana azy, ny fikirakirana ary ny fampiasana azy dia tsotra ihany, eto ambany aho manome antsipiriany izay ilaina mba hankafizanao an'ity traikefa ity, ary raha te-hitobaka eto amin'izao tontolo izao ianao Vitunes Izy io dia manana antontan-taratasy feno izay tafiditra ao anatin'ny fametrahana ihany koa.
Manokatra ny console izahay.
Mametraka amin'ny Arch Linux.
Ny dingana manaraka dia ny fanombohana ny tahiry
Ankehitriny dia tsy maintsy ampidirintsika ao anaty angon-drakitra ireo rakitra izay tianay havoaka, ohatra:
$ vitunes -e manampy ~ / Music /
Hahatonga ny rakitra rehetra ao anatin'ny lahatahiry ~ / Mozika / lahateninay ho ampidirina ao amin'ny tahiry mozika. Vitunes, na inona na inona isan'ny reperitoara ao.
Raha vantany vao vita ny voalaza etsy ambony dia mihazakazaka fotsiny isika vitunes ary afaka mankafy ny mozika izahay.
Raha tadidinao dia ao anaty console izahay ary manjary minimalist izahay, noho izany tsy hanana fanaraha-maso mahazatra mahazatra hanatanterahana ireo asa ifotony indrindra izahay
Amin'ity manaraka ity dia hilazako ny sasany amin'ireo hitsin-dàlana fitendry izay mety hanampy anao, amin'ny endrika "Key" = Action.
«Ampidiro» = Atombohy ny famerenana.
«Z» = Miato kely amin'ny playback ankehitriny.
«S» = Atsaharo ny famerenana amin'ny laoniny ankehitriny.
«F» = Mandrosoa ny playback ankehitriny 10 segondra.
«F» = Mandrosoa ny playback ankehitriny 1 minitra.
"B" = Avereno ny playback afaka 10 segondra.
"B" = Avereno ny playback afaka 1 minitra.
Raha vao mahay mampiasa VitunesFotoana hanomezana azy ity ny fifandraisana, azontsika atao izany amin'ny alàlan'ny fandokoana ny lafiny hita maso ary koa ny fametrahana ny fampahalalana ilaintsika eo amin'ny efijery momba ireo sangan'ny mozika eto amintsika, tratra izany amin'ny alàlan'ny fanovana rakitra rakitra tsotra.
Manokatra ny terminal sy ny karazany izahay.
Fanamarihana: Afaka manolo vim avy amin'ny mpamoaka lahatsoratra nofidinao.
Izahay dia mamaritra ny fampahalalana ilainay eo amin'ny efijery ny bika, halavany, halavany, ohatra.
mampiseho mpanakanto.20, lohateny.50, -length.20
Ity dia hampiseho amintsika tsanganana telo, ny anaran'ilay mpanakanto izay ny habeny eo amin'ny efijery dia ho 20 endri-tsoratra, arahin'ilay lohateny miaraka amina toerana 50 endri-tsoratra ary farany ny halavan'ny lalana, izany hoe, ireo minitra hilalaovan'ny lalana, ny hyphen (-), dia manondro fa ny tsanganana dia hampifanarahana amin'ny ilany ankavanana.
Raha vantany vao voafaritra izany dia tonga ny fotoana hanomezana loko manokana ny tsanganana tsirairay amin'ny endrika, tsanganana = color_of_la_letra, color_of_background.
mpanakanto miloko = maintso, banga
lohateny miloko = manga, default
halavan'ny loko = maintso, tsy misy fangarony
Tamin'ity fomba ity dia nianatra nampiasa sy nanamboatra ny mpitendry mozika tsotra sy maivana ary minimalista izahay ho an'ny konsol, na izany aza, raha te-hanana be dia be amin'ny safidy natolotry ny Vitunes anay ianao dia manasa anao hamerina hijery ireo antontan-taratasy amin'ny alàlan'ny baikon'ny lehilahy. Ho an'ity dia mandeha any amin'ny console sy type izahay.
Raha mila sary an-tsaina tsaratsara kokoa ny antontan-taratasy dia manasa anao aho hitsidika ny lahatsoratra, Fandokoana ireo pejy fitantanana.
Tsotra toy izany ...
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » fampiharana » Vitunes. Ahoana ny fananana mpilalao mozika faran'izay tsara sy minimalista
itrative dia hoy izy:
angona minimalist sy kanto ary tena tsara… .. Hodinihiko ho mpilalao mozika manaraka io…
Valio ny itrative
😀 Ny lahatsoratro voalohany amin'ny desdelinux, manantena aho fa maro ny ho avy ary nahavita nanome fahafaham-po ny andrasan'ny mpitsidika an'ity bilaogy ity aho ...
Misaotra an'i elav nanolotra ahy ny fotoana 😀 !!! ...
Safidy hafa ho an'ireo tia konsolosy, mampiasa moc tiako minimalism aho
Manao moc foana aho fa andao jerena ity zazakely ity. Tsy maintsy manangona azy aho satria tsy ao amin'ny repo fitsapana debian (amin'ny debian dia tsy matahotra "configure make" tsindraindray isika). Fa ilay zavatra "mamatotra vi-like" mahery ao amin'ny pejy vitunes dia manintona ahy, izay rehetra manitra toy ny vi dia mifikitra amin'ny nifiko aho. Zathura ohatra, mpamaky pdf toa vi.
Tokony hanome fanamarinana dwb ho toy ny mpizaha tranonkala ianao 🙂…
Natambatra sy notsapaina… .. mandresy be ny moc.
Hanana fotoana hidirana ao aminy miaraka amin'ny moc aho ary hahafantatra azy tsara kokoa, amin'izao fotoana izao dia faly aho hahafantatra an'i Gentoo xD ... Ho avy aho hilaza aminao ...
Raha ny tokony ho izy, azonao omena anay ve ny didim-pitsarana momba ny antony ...
Talohan'ny nampiasako ny ncmpcpp + mpd, tiako be dia be izany, ny fotoana nametrahana azy dia nandany fotoana nefa tena niasa na dia nanana safidy maro aza aho dia nandalo ny sasany na dia moc aza, ary alohan'ny hanomezana azy ireo fotoana feno dia nihaona tamin'i Vitunes aho ary nijanona, dia hanome azy ireo fotoana tokoa aho indray ho an'ireo izay nijanona teny an-dàlana ary ho avy haneho hevitra eto aho hoe nanao ahoana ...
PS Misaotra elav…
Tongasoa ianao DMoZ .. Etsy andanin'izay, efa nanandrana MP3Blaster ve ianao?
Tsy mbola izao, fa manome toky anao aho fa ...
Hmm, mahaliana. Hanandrana azy iray andro aho ^^
Manontany tena aho fa mahita hafatra ambanivohitra: 'V' iTunes xD
Heveriko fa ny hitako dia mihoatra ny iTunes refers
Mitovy bebe kokoa amin'ny fitambarana Vi-Itunes, sa tsy izany ??? … Fampiasana marketing tsara 😛…
Ka ny minimalism ve dia ny fampitsaharana ny fampiasana ny totozy?
Iray andro izao dia andramako io programa io.
Tsia ... fa miresaka an'izay atao hoe Basic, Simple ary Functional = D ... Raha tsy ara-dalàna dia tsy midika fijanonana amin'ny fampiasana ny totozy akory izany, tsy maintsy nahita ny DESKO aho na dia miaraka amin'ny KDE minimalist aza, fa ny KDE dia tsy minimaliste loatra, efa ranon'ny hafa izany. renirano 😛 ...
Efa noeritreretiko izany, fa na izany na tsy izany dia mamaky minimalist ny iray ary tonga ny pikantsary tahaka ny tao amin'ilay lahatsoratra.
Amin'ny lafiny tsara.
xD ... Raha ny marina, izao dia mahazo aina kokoa aho amin'ny alàlan'ny hitsin-dàlana fitendry fotsiny, mbola mampiasa ny totozy ihany, indrindra ny fitetezana Internet, fa tsy miankina amin'izany intsony 😀 ...
Ianao ihany ilay fahirano izay hitako avy any ba-k marina ??? ...
Toa tsara izany, ampiasako ny moc amin'izao fotoana izao, (mozika amin'ny console) fa hanome izany fitsapana izany aho raha manome zavatra tsara kokoa, misaotra amin'ny tendrony;).
Fanamboarana ny fitaovana Newport Beach dia hoy izy:
Salama, tiako ny bilaoginao. Bilaogy Fromlinux.net. Misy zavatra azoko atao ve hahazoana fanavaozana, toy ny famandrihana na zavatra hafa? Miala tsiny fa tsy haiko ny RSS? mirary anao ho tsara vintana!
Valiny amin'ny fanamboarana ny fitaovana Newport Beach
Firefox 11 dia ho hita afaka ora vitsivitsy